Fitrandrahana Industry - China Shandong Yulong Cellulose
Industry CMC harena ankibon'ny tany no ampiasaina ho toy pelletizing boky voaravitra sy mahakivy orinasa mpandraharaha amin'ny harena ankibon'ny tany. Ny manta pellet nataon-tsara CMC manana anti-fipoahana fampisehoana avo fanerena sy ny lavo hery ny maina sy lena bala. Mandritra izany fotoana izany, dia afaka manatsara ny kilasy ny bala. Ao amin'ny pellet fampiharana, dia afaka ho azy CMC manana sphericity tsara, tsindry fanoherana, deformation fanoherana, tsara pielezana, avo tanjaky ny mando pellet, avo manohitra ny fipoahana mari-pana, fahaizana mifehy mafy sy rel ...
Ao amin'ny pellet fampiharana, dia afaka ho azy CMC manana sphericity tsara, tsindry fanoherana, deformation fanoherana, tsara pielezana, avo tanjaky ny mando pellet, avo manohitra ny fipoahana mari-pana, mafy fahaizana mifehy ny rano sy hamoaka ao amin'ny pellet sy ny tsara metallurgical fampisehoana.
In sulfide flotation, CMC afaka be kokoa ny wettability ny talc granule sy mahatsapa flotation fisarahan'ny sulfide akora sy ny talc.
CMC no ampiasaina ho silicate gangue inhibitors mba manakana nitarika ny fisarahan'ny varahina sy ny firaka. Ary indraindray dia ampiasaina ho toy ny dispersant ny fota.
Ny karazana orinasa mpitrandraka: IP50 sy IP100
Previous: Toothpaste Indostria